Tutorial တွင် ပြုလုပ်လိုသော ပုံစံမှာ အောက်ပါ ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့် object များမှာ background gradient layer နှင့်2text layers တို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာသားအောက်ခြေက ရောင်ပြေးပုံစံကိုတော့ Layer Mask ကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Background ကို မိမိနှစ်သက်ရာ Gradient ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် မိမိပြုလုပ်လိုသော စာသားကို ရိုက်ပါ။
2. ရရှိလာသော စာသား Layer ကို Duplicate (Layer Menu > Duplicate) or (Ctrl+J) လုပ်ပါ။
3. အသစ်ရရှိလာသော စာသား Layer ကို အပေါ်အောက် ပြောင်းပြန်လှန်ရန်အတွက် Free Transform (Ctrl+T) or (Edit>Free Transform)ကိုရွေးပါ။ ထိုနောက် စာသားတွင် selection box ပေါ်လာပါက Right Click နှိပ်ပြီး Flip Vertical ကိုရွေးပါ။
၄။ Flip Vertical လုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက်တွင် စာသားနှစ်ခုကို အောက်ပါအနေအထားအတိုင်းရရှိအောင် ပြုလုပ်ပါ။
၅။ ဇောက်ထိုးဖြစ်နေသော စာသား Layer ကို Layer Mask ထည့်သွင်းရန်အတွက် စာသား layer ကို layer box တွင် select ပေးပြီး Add Layer Mask Button ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်တွင် စာသား layer ၏ ဘေးတွင် Layer Box Thumbnail box လေးကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
၆။ Gradient Tool ကိုရွေးပါ။ မှတ်ချက် - layer mask အသုံးပြုရာတွင် Black and white အရောင် နှစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Gradient box တွင် black and white နှစ်ရောင်စပ် ဖြစ်နေရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခြားရောင်ပြေးများ ၀င်နေပါက Black and White သို့ ပြန်ရွေးပေးပါ။
၇။ Gradient Box တွင် ပြနေသော ပုံစံမှာ အဖြူရောင်မှ အနက်ရောင်ဘက်သို့ သွားနေသည့်ပုံစံ ဖြစ်ရပါမည်။ ထိုနောက် ဇောက်ထိုးဖြစ်နေသော စာသား၏ ထိပ် သို့မဟုတ် ပထမ Text layer ၏ ထိပ်တွင် Gradient Tool Pinter ကိုထားပြီး အောက်သို့အနည်းငယ် Top to Bottom ဆွဲချပါ။ ရောင်ပြေး တစ်ဖြောင့်တည်းကျစေရန်အတွက် Shift Key ကို ဖိထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိမိအပေါ်အောက်ဆွဲသည့် အလျားပေါ်မူတည်ပြီး စာသား၏ effect ကိုတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲသည့်အလျား ရှည်လွန်းသွားပါက စာသား၏ အောက်ခြေများတွင် effect ရောက်ရှိမှု နည်းပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် မိမိလိုချင်သည့် ပုံစံအရ လိုသလို ချိန်ဆပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် - သဘောတရားမှာ အဖြူရောင်ရှိသည့် နေရာများကို ချန်ထားခဲ့ပြီး အနက်ရောင်ရှိသည့်အပိုင်းများကို ၀ါးသွားအောင် ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခေါက် မကြိုက်နှစ်သက်ပါက ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေဖြင့် ပြန်လည်ဆွဲချနိုင်ပါသည်။
၈။ Layer mask သုံးထားသော Layer ကို layer box တွင် select ပေးပြီး opacity ကို လျော့ပေးပါ။ အကြောင်းမှာ shadow ကျသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သိသလောက်၊ မှတ်မိသလောက်သာ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ဖြည့်စွက်ချက်များ၊ အကြံပေးချက်များ အတွက် comment များကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Graphic/Web Design howto
Labels: Graphic/Web Design howto
tayzar 2:07 pm
အကိုရေ tutorial လေးရေးပေးတာ တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို။ နောက်လည်း ဆက်လက် ဝေမျှနိုင်တဲ့ သူဖြစ်နိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ။ =)
CMS 3:06 am
no problem ပါ ညီလေး။ မြန်မာစာ စာလုံးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ပုံစံလှအောင် baseline shift သုံးတဲ့ tutorial ထပ်ရေးပေးပါဦးမယ်။
tayzar 6:09 am
ဟုတ် အကိုရေးပေးပါဦး baseline shift ဆိုတဲ့ စကားလုံး တောင် အခုမှ မြင်ဖူးတယ်။